အတိတ်မှာပိတ်မိနေတတ်တဲ့သူတွေအတွက် အတွေးအခေါ်ကောင်းတစ်ခုကို မျှဝေလာတဲ့ဖွေးဖွေး - Cele Gabar
အတိတ်မှာပိတ်မိနေတတ်တဲ့သူတွေအတွက် အတွေးအခေါ်ကောင်းတစ်ခုကို မျှဝေလာတဲ့ဖွေးဖွေး
By RainowPosted on August 14, 2020
လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေဖြစ်တည်လာဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးအချိန်က ကလေးဘဝပါပဲ။ ကလေးဘဝမှာ စိတ်ဓာတ်ရိုက်ချိုးခံခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်က အသက်ကြီးလာရင်လည်း အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲ ရှင်သန်သွားနိုင်ပြီး အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ငယ်ဘဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ဘယ်သူမှပြောင်းလဲလို့မရပေမယ့် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်၊ စိတ်ခွန်အားတွေနဲ့ ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားသင့်ကြောင်း ဖွေးဖွေးက သူ့ရဲ့အတွေးတချို့ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
” ယှဉ်ပြောခံရတဲ့ကလေးလေးတွေ ကြီးလာတဲ့အခါ တခုခု ဆို ယှဉ်ပြီးတွေးတတ်တဲ့ ယှဉ်ပြီးပြောတတ်တဲ့ လူကြီးတွေဆက်ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်.. ဒါလည်း ကလေးတွေအပြစ်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး…ဒါပေမယ့်!!! ကလေးတုန်းကတော့ ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ လုပ်သမျှပြောသမျှ ခံခဲ့ကြရတယ် ဆိုပေမယ့်..
အမှန်က… လူကြီး ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဘယ်လိုလူ ဆက်လုပ်ချင်သလဲဆိုတာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်.. အရင်က ကလေးလေး လိုပဲဆက်နေမလား???? ဆင်ကလေးလေးတွေဟာ သူတို့ကလေးလေးထဲက ခြေထောက် ကို ချီထား ထား ခံခဲ့ရတဲ့ သံကြိုးလေးကို ရုန်းလို့မရခဲ့သလို… ဧရာမသစ်တုံးကြီးတွေကို မ, နိုင်တဲ့ ဆင်ကြီးမိုမိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတောင် ဒီသံကြိုးလေးကို မရုန်းနိုင်ဘူး ထင်ပြီး နေနေတတ်သလိုမျိုးပေါ့…
ကိုယ့်မှာ ကိုယ်တောင် မသိတဲ့ စိတ်ခွန်အား လူခွန်အားတွေ ရှိနေတတ်တယ်ဆို တာ မမေ့ဘဲ… လွတ်မြောက် ပြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ လူ ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ် .. လူတိုင်းကိုမဆိုလိုပါဘူး… ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ကိုယ်ပါ… ကျွန်မ တွေးမိတာလေး မျှဝေရုံပါ” ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ.. လူတော်တော်များများကတော့ အတိတ်မှာပိတ်မိနေတတ်ကြတာမို့ ဖွေးရဲ့အတွေးလေးအတိုင်း စိတ်ခွန်အားယူပြီး ကြိုးစားကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous post ကိုယ်မွေးတဲ့လလေးမှာ လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို ဆက်တိုက်အလှူဒါနပြုနေတဲ့ ချစ်သုဝေ
Next post မေမြို့လေးမှာမြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေပြန်တဲ့ ထရက်ရှာလေးနဲ့မေမေစန္ဒီမြင့်လွင်တို့နှစ်ဦး